E-mayl ma soo marayaan? Kudar diiwaan SPF! | Martech Zone
E-mayl ma soo marayaan? Kudar diiwaan SPF!
Wednesday, April 30, 2008 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Kaliya waxaan u haajiray emaylka shirkadayda Codsiyada Google. Illaa iyo hadda, runtii waxaan jecel nahay xorriyadda ay na siineyso. Kahor joogitaankeena Google, waxaan u adeegsan jirnay codsiyo wixii isbadal ah, liis gareyn ah, iwm. Hada waxaan kula tacaali karnaa dhamaanba isdhexgalka fudud ee Google.
Hal dib-u-dhac oo aan ogaanay, in kastoo, ay ahayd in emaylka qaarkood laga soo diray our Nidaamku dhab ahaantii kama dhigayo us. Waxaan xoogaa ku aqriyay talada Google Dirayaasha Emailka Jumlada oo si dhakhso ah u shaqo bilaabay. Waxaan haynaa emayl ka soo baxaya 2 codsi oo aan martigelinno, codsi kale oo qof kale martigaliyo marka lagu daro Bixiyaha Adeegga Emailka.
Fikirkeyga kaliya ayaa ah in Google ay si aan kala sooc lahayn u xireyso qaar ka mid ah emaylka maxaa yeelay ma ansaxin karo qofka soo diray iyada oo loo marayo an Diiwaanka SPF. Si kooban, SPF waa qaab aad ku diiwaan geliso dhammaan cinwaanadaada, cinwaanada IP-ga, iwm. Ee aad emayl ugu dirto meel ka baxsan diiwaanka bogga. Tani waxay u oggolaaneysaa ISP kasta fiiri diiwaankaaga oo cadee in emaylka wuxuu ka imanayaa ilo ku habboon.
Waa fikrad aad u fiican - mana hubo sababta aysan u ahayn hab guud oo ah emayllo waaweyn iyo nidaamyada xannibaadda spam. Waxaad u maleyneysaa in diiwaan-haye kasta uu ka dhigi lahaa hal dhibic in lagu dhiso saaxir xaq u leh qof walba si uu u taxo ilaha iimaylka ay dirayaan. Qof walba waa inuu adeegsadaa oo ku xaqiijiyaa SPF! Waa tan maqaal qoto dheer oo ku saabsan SPF iyo faa'iidooyinka, mid ka mid ah inuu yahay awooda ka ilaalin kara boggaaga inuu ku jiro liiska madow ee spammers iska dhig inaad ahaato
TALO: Waad xaqiiji diiwaankaaga SPF waa 250ok.
Si aad u qorto diiwaankaaga SPF, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka gaarto halka ay Saaxiibka SPF, aalad khadka tooska ah kaa caawineysa inaad rikoorka kuu qorto. Kadib si fudud ayaad nuqul uga sameysaa oo ugu dhejisaa Diiwaangelintaada Domain. Waxaan cusbooneysiineynaa diiwaankeena markaan qorayo qoraalkan!
Marka xigta liistadeyda waa baaritaan Furayaasha Domain. Tallaabo weyn ayaan horay u qaadnay markii aan joognay lagu caddeeyay AOL sanadkii la soo dhaafay. Waxaan dareemayaa in dagaalku waligiis istaagi doonin! Aad ayey u xun tahay runti shirkado sumcad leh oo ay tahay inay ka boodaan dhammaan qashinka SPAM weli!
Tags: 250oksamatabbixinmailkoodajunkqaab siyaasaddeedka dirahaspamfilter spamCiidanka Booliiska Soomaaliyeeddiiwaanka spf
Waxaan aaminsanahay Web 3.0!
Is-afgarad kuguma guuleysan doono
Apr 30, 2008 at 10: 03 PM
Dhibaatada haysata SPF iyo Aqoonsiga Sender-ka ayaa asal ahaan ah inay jabiso gudbinta emaylka. DomainKeys (iyo heerka hadda loo yaqaan DKIM) waa mawjadaha mustaqbalka, inta dadka badankood ka welwelsan yihiin; si kastaba ha noqotee, way ka sii adag tahay in la geeyo oo la ansixiyo.